ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို ဒီဘလော့မှာသာမက ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာလည်း ကြည့်ရှုလို့ရအောင် page တစ်ခု ထောင်ထားပြီးပြီုဖစ်ကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။ page နာမည်က ငါတို့ဟာမင်းသားယောင်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 12:24 PM No comments:
ကျွန်တော်ဟာ ဒီစာအုပ်ကို ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းစတင် မ ရေးသားခင် တည်းက ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက သူမရေးခင် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ပြောပြတယ်။ ကျွန်တော်က
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ အတော်အတန်ဝေဖန်ခံရမယ့် ဇတ်လမ်းဆိုတာ ဆရာ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ ဆရာအောင် ရင်ငြိမ်းဟာ အတူတကွ နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်ခံရမယ့် ဇာတ်လမ်းလို့သိပေမယ့် မွန်းကြပ်ပိတ်လှေင်နေတဲ့ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကို ထက်မြက်တဲ့ စာပေအရေးသားတွေနဲ့ ဖောက်ထွက်မှရမယ်လို့ ယူဆထားသူဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစာအုပ်မျိုးရေးဖို့ ဝမ်းသာအားရ ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကလည်း ဒီလိုအယူအဆကြောင့် ရေးသားပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာက အနုပညာအားအရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော် ရင်ဘတ်နဲ့လွယ်ပြီး ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။ အပြာခန်းတွေအတွက် ဆရာက ရေးခဲ့တာ လုံးဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း စာအုပ်အဖုံးမှာ ၁၈ နှစ်အောက်မဖတ်ရနဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေအတွက်မဟုတ်လို့ ကြေညာထားတာပါ။ ဒီစာအုပ်ထွက်လာတြော စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသိုင်းဝိုင်းတွေကို ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ့စာအုပ်ကို ထောက်ခံတာကြောင့်ရယ် အတူတူနေပြီး မလုပ်ဖို့မတားခဲ့တာတွေရယ်ကြောင့် ကျွန်တော့်အပေါ်လည်း များစွာဖိအားပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ထပ်ပြောရရင် ကျွန်တော်ဟာ ဆရာ့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို နဲနဲလေးမှ သံသယဝခြင်းလုံးဝမရှိပဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့အတွက် ကျွန်တော် နောင်တရခြင်းလုံးဝမရှိပဲ ဂုဏ်တောင်ယူမိပါသေးတယ်။
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 1:27 AM No comments:
ကျောင်းရှေ့  ၀ါးကွပ်ပစ်ပေါ်က
မော့ကြည့်လို့ မြင်ရတဲ့ ကြယ်တွေလောက်
စွတ်စိုကြေကွဲ ဆောင်းရာသီ နံနက်ခင်းတလျှောက်
အိပ်ရာထတတ်တဲ့ ငါတို့ ၀ါးကျောင်းလေးမှာ
ခင်ဝမ်းရဲ့  နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်သီချင်းနဲ့ ၀ိုင်းဝိုင်းရဲ့  ဖြေသိမ့်လိုက်သီချင်းက
အကောင်းဆုံး နှစ်သိမ့်ဆေးတွေ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့
ဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့  နှင်းဆီတစ်ခင်း
မျက်စိရှေ့ မှာတင် ပွင့်ဝေကြွေကျ မမြဲခြင်းတွေ
ငါတို့ အားလုံး ရင်ဘတ်နဲ့ လွယ်ခဲ့ကြရ
အားလုံးရဲ့  စိတ်အနာတရတွေကို ကုစားဖို့
ဘယ်လို အရိပ်ဆိုးတွေ ထိုးလာဦးမလဲ
မင်းတို့တတွေ စကားလုပ်ပြီး ပြောနေကြဦးမလား
ငါတို့ရဲ့  သူပုန်မွေးမြူရေးစခန်းလေး
ငါတို့ ကျောင်းလေးပေါ် နေပြောက်တွေကျအလာ
ဘယ်ချောင်မှာသွားပုန်းပြီး ငိုနေမလဲ တွေးမိတယ်။ ။
(ဒလမြို့ နယ် ရာဇသင်္ကြန်ရပ်ကွက်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဒို့ကျောင်းအခမဲ့စာသင်ကျောင်းလေးဟာအခုခါမှာ ကျောင်း ကြမ်းခင်းပြင်ဆင်ရေးအတွက် အလှုငွေလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအသုံးပြုထားတဲ့ ၀ါးကြမ်းခင်းဟာ ဆွေးမြေ့  နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းဖွင့်လှစ်လျက်ရှိပြီး ၀ါးကြမ်းများ ကျိုးပဲ့နေမှုကြောင့်
ခလေးများ မကြာခဏဆိုသလို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနေပါတယ်။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ ကျောင်းကြမ်းခင်းအသစ်လဲဖို့ စီစဉ်ထားပြီး အလှုငွေ တတ်နိုင်သမျှ ပါဝင်ကူညီကြပါရန်နှင့် ပညာရေးလိုအပ်ချက်များအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာက တတ်စွမ်းသ၍ ပါဝင်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကျောင်းတာဝန်ခံက ကဗျာဆရာ ရွှေကြယ်မိ်ုးဖြစ်ပြီး ကျောင်းသင်တန်းကြီးကြပ်သူက ကဗျာဆရာ အောင်ရင်ငြိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်က ရွှေကြယ်မိ်ုး (09-31421674)ဖြစ်ပါတယ်။)
(ဒလမြို့ တော် သတင်းဝက်ဆိုဒ်မှ ကောက်နုတ်ချက်)
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 3:44 AM No comments:
ရိုးသားတဲ့ မဖြူစင်ကို ကူပါ
ကုပ်ကိုပင်အို လွမ်းရိပ်ညို ဆိုလား
ဟောဒီ့လမ်းကလေးရဲ့  အုံ့ဆိုင်းမှုအောက်မှာ
ဒီဘက်ကမ်းက မောင် ရှိနေတယ်
မဖြူစင်ရဲ့  ဟန်တွေ ကဗျာဆန်လာခဲ့တယ်
လူတွေရဲ့  နံရံကြီးကို
သူတို့ရဲ့  လက်တွေဟာ
လူတွေက ငွေကြေးနဲ့ ၀ယ်ကြမှာ
စိုးရိမ်တတ်တဲ့ မဖြူစင်ရဲ့ 
၅၀၅ (ခ) လား
မဖြူစင်ရဲ့  ဖြူစင်ခြင်းကို
ရင်ထဲက မိုးတွေ ပြိုမကျမိဖို့ပဲ
အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား မဖြူစင်
နှင်တွေ ဝေနေ ဝေနေ လူ့ဝန်းကျင်ဟာ
မဖြူစင်ရဲ့  ရွာအ၀င် ပုံပြင်တွေကို
လောကဓံက မောင်တို့ကို လာ ပွေ့ပိုက်မှာပဲ
မောင့်ကို အမြဲတမ်း နာကျင်စေတယ်
ဘ၀နဲ့ ဆန္ဒ တစ်သားထဲ မကျလည်း
ထာဝရဘုရားရဲ့  ဖန်တီးမှုမှာ
ဘယ်ဗျိုင်းမှ မနားပဲ လေရိုင်းတွေဝှေ့တိုင်း
မောင်တို့ရယ်သံတွေ ကဗျာတွေ အားလုံး
မဖြူစင်ရဲ့  ဘ၀ထဲ
ပန်းချီဆန်တဲ့ မြစ်ပြင်လေးကို ပွေ့ချီရင်း
မဖြူစင်ရဲ့  သက်ပြင်းလေးနဲ့
လှိုင်းရဲ့  အရိပ်ဟာ
ဂူနန်းသမျှ နွေးထွေးတဲ့ တိုက်တာထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ်
ကြိုးညှိလို့ရတဲ့ ဂီတဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး
နိုင်ငံတော်မှာ ဘယ်သူမှ မျဉ်းဖြောင့်ဖြစ်ချင်လို့
မရဘူး ဟုတ်တယ်မလား မဖြူစင်
ဘ၀ကို ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီးမှ
ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ရမယ့် အဖြစ်မျိုး
အဖြူစင်ရဲ့  အဖြူရောင်ကို
ကော်ဖီတွေ စီးကျလာမှာ သေချာတယ်
ညရဲ့  အသွေးအသားတွေ
ချော့မြူလို့ ရှေ့ ဆက်ဖို့အားပေးလို့
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 4:06 AM No comments:
လှိုင်ရီရီခံတပ်မှ နေ၀င်ချိန် နောက်ဆုံးခုခံတိုက်ပွဲများ
ကိုယ်တို့ဘ၀တွေ မိုးမှလင်းပါ့မလား ညီမလေး
မမျှော်လင့်ထားတဲ့ အရာတွေကို မျှော်လင့်ထားပါ
တောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ အဆက်မပြတ် ၀ဲပျံကျ
ဦးတည်ရာမရှိ လမ်းပြမြေပုံများ ဟောင်းနွမ်းသွားပြီ
ညီမလေးရဲ့ လက်ချင်းတွဲထားလိုတဲ့ အလင်းတံခါးများ
ပုခုံးထက်က ၀တ္တရားမှာ ညီမလေးလည်း နာကျင်ခဲ့ရတယ်
ငြိတွယ်ခြင်းမှာ ဘယ်တရားဓမ္မမှ အသုံးမ၀င်တော့
ကြားရတာက ချက်ချင်းလိုလို ကြွေကျသွားတဲ့
တွေးလို့မရနိုင်တဲ့ ဇာတ်သိမ်းတွေနဲ့ အရာရာကို
အားတင်းထားစမ်း အရင်ကလို စာတွေသင်ပေးမယ်
ပုံပြင်တွေနားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ပုံပြင်တွေ ပြောပြမယ်
ကိုယ်တို့ဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို အတိတိနာကျင်နေရတာကို
ရှိရှိသမျှဒိုင်းတွေနဲ့ ခုခံဖို့ပဲအမြဲတွေး ညီမလေး
ပတ္တမြားရောင် အဆီအနှစ်နဲ့ ညနေဟာ
သဲတွေနဲ့ ဆင်ခြေလျှောလေးဆီ လျှောဆင်းလာတယ်
ညီမလေးရဲ့ ဆံပင်တွေလည်းဝဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဆံပင်တွေလည်းဝဲ
လေထဲမှာ ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ အိပ်မက်တွေ ဖြစ်လိမ့်နိုးနိုးပေါ့
ပထမပိုင်းနဲ့ နောက်ဆုံးပိုင်းကို ရုပ်ရှင်တွေလို
သိပ်ကွာဟပစ်လိုက်ဖို့ မစဉ်စားနဲ့ ညီမလေးရေ
သိသာတာကလား ညီမလေးလိုမျိုး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရယ်မောဖို့
ခုတော့ ညီမလေးက ငိုကြွေးခြင်းဆိုရင်
ကိုယ်က နာကျင်ခြင်းပေါ့ ညီမလေးက ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုရင်
ကိုယ်က အောင်နိုင်ခြင်းပေါ့ ဒင်္ဂါးပြားတစ်ဖက်ထဲမှာပဲ
ခံတပ်ကလေးမှာ တရွေ့ ရွေ့ နဲ့
မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာရတဲ့ ပုံပြင်တွေ
ရင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် သည်းခံနိုင်ရမယ် ညီမလေး
ညီမလေးကို ကိုယ့်လောက် ဘယ်သူကမှ
မီးခိုးတွေလို မှုန်မှိုင်းမှုတွေ စိပ်လာလေလေ
ဘယ်အရာတွေကများ ငါတို့ကို အပင်မြင့် နန်းဆန်စေမှာလဲ
ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဘ၀မှာပဲ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်
ညီမလေးရဲ့ ကိုကို ညအမှောင်မှာညှိုး
မျက်စိရှေ့ မှာတင် တဖြည်းဖြည်းချင်း
ညီမလေးရဲ့ ခံတပ်ကလေး ကိုယ့်ကြောင့်
တစ်ခါကရာဇ၀င်ထဲမှာ အန္ဓလူမိုက်တွေရဲ့ သွေးနဲ့
ရက်ဖောက်လှပခဲ့တဲ့ ဧကရီမတစ်ပါး ရှိခဲ့ဖူးတယ်
ညီမလေးလည်း လက်အစုံ လှိုင်းထန်မာကြော
ရဲတင်းသထက်ရဲတင်းရင်း ရှေ့ တိုးကြမယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေမှာ
သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ သူပုန်မလေးဖြစ်သွားတယ် တူရဲ့
မိုးမလင်းမချင်း ညီမလေးကို ထားခဲ့ရလိမ့်မယ်
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာ ကိုယ်တို့လည်း
ညီမလေးကို ရိုးသားခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုလို့ပဲ
ငါတို့တွေ တောင်အရပ်က စကားပြောလို့ အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခါ
မြောက်အရပ်ကနေ လှည့်ပြီး စကားပြောကြမယ်လေ
ညီမလေးကြောင့် ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့
မြည်လာခဲ့ရင် ဘယ်တော့မှမဝေးဘူးဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့
နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာ ရဲဝံ့စွာ စတေးခံတော်လှန်ကြမယ်
ဒီမှာ ညီမလေး လူတွေကအရမ်းရက်စက်ကြသလိုမျိုး
ကိုယ်တို့ကလည်း ကိုယ်တို့တတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ
မယုံနိုင်စရာပါပဲ အသက်ရဲ့ လှိုင်းခတ်သံ
နှလုံးအိမ်မှာ ရိုက်ခတ်တိုင်း တစ်ရက်ခြင်းစီဟာ
ဘယ်တော့မဆို ရယ်မောတတ်ပါစေ ညီမလေး
ဘယ်တော့မဆို အဓိကကျတာကို ဖမ်းဆုပ်တတ်ပါစေ ညီမလေး
အချိန်တိုင်းမှာ ညီမလေးဟာ လက်ယဉ်ပြီးသား
ခဲလုံးလေးတွေ ရေထဲကို ပစ်ပေါက်ကြည့်တိုင်း
မုန်းတီးရတဲ့ ကမ္ဘာမြေကို ပစ်မှတ်ထားတယ်လို့ ခံစားပါ
ဘာကိုမှ လျှော့မတွက်နဲ့ ညီမလေး
ကိုယ်တို့က ကိုယ်တို့အဖြစ်နဲ့ ရှင်သန်နေမှာပါပဲ
နဲနဲလေးတောင် ဓမ္မမဆန်တဲ့ သူတော်စင်တွေကို
အဓမ္မဆန်ဆန် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းပစ်ရမယ်
မင်းက နူးညံ့ညင်သာပြီးသားပါ ညီမလေး
ခုတော့ ညီမလေးလည်း ရင့်မာသင့်သလောက်
ငါတို့က တုံ့ပြန်ခြင်းတွေ ပြန်မွေးဖွါးလေနဲ့
ရန်ကို ရန်ခြင်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ကြရင်း
ငါတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို သံသရာလည်ပတ်စေရမယ်
ယုံကြည်ချက်ဆိုတာ ဆူးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆောက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်
ပွတ်သပ်ယုယနေရတာကိုပဲ သည်းခံတယ် ပြောမလား
လူတွေက အဲ့ဒီ့လောက် ရက်စက်ပြနေမှတော့
ကိုယ်တို့ကငြိမ်ခံရင်း တရားဒေသနာတွေကို ခေါင်းထဲထည့်နေရဦးမလား
ငါတို့အသိတရားမှာ ငါတို့ထိခိုက်နေရသမျှ ကာ လပတ်လုံး
တစ်ခုခုကတော့ သေချာပေါက် ကွဲကြေ
ဘ၀ကိုပုံဖော်ထားရင်း မရေရာတဲ့ အနာဂါတ်အတွက်
ခင်ဝမ်းရဲ့ 'ပြည်မှာဆောင်း'ကို တိုးတိုးလေး
ကိုယ်တို့ကို မှုန်ဝါးသထက်မှုန်ဝါးလာစေနေပါလား တွေးမိတယ်
စိတ်မကောင်းစရာတွေကို စီးကရက်တွေနဲ့ ဖြေဖျောက်သလိုမျိုး
ညီမလေးကလည်း စာတွေကျက်ရင်း ဖြေဖျောက်နိုင်ပါစေ
ဖြစ်နိုင်ရင် ဆုတောင်းခြင်းအလုပ်ကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ
ငါတို့ ငယ်ငယ်ကသင်ခဲ့ရတဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတာ ယုံတမ်းပဲ
ကိုယ်တို့လည်း ကိုယ်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လမ်းမတစ်လျှောက်
ကိုယ်တို့ကတော့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင် အားကြိုးမာန်တက်
တိုက်ခိုက်နေပုံပါတဲ့ အလံလေးကိုပဲ ဆက်ပြီး ကိုင်စွဲကြမယ်
ညီမလေးရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းထိရောက်အောင်
ပို့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုလူကမှ ဒုက္ခလာပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးဆီ ရန်သူတွေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ မီးကျည်တွေက
သူတို့ရဲ့ တပ်စခန်းတွေကိုပဲ ထိမှန်စေလိမ့်မယ်
ငွေ့ငွေ့ကလေး ရုန်းကန်ရှင်သန်ခဲ့ရတယ် ဘယ်လောက်ပဲ နီးကပ်နေပါစေ
ဝေးကွာခြင်းကို ဘယ်သူမှ တားလို့ဆီးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး ညီမလေး
ကိုယ်တို့တတွေရဲ့ အောင်မြင်ခြင်းဟာ ဖြူစင်မှာဖြစ်သလို
ကိုယ်တို့ချစ်ခြင်းရဲ့ ၀န်းကျင်တခွင်ကို ကိုယ်တို့
အလွယ်တကူ အညံ့ မခံခဲ့ကြဘူးဆိုတာ
ညီမလေး ဂုဏ်ယူနေရမယ်။ ။
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 12:36 AM No comments:
ငါတို့ရဲ့ ရွှေပြည်တော်ထဲ နေ့စွဲများ
အတည်ငြိမ်ဆုံးစိတ် အိပ်မက်တွေကို ဖျက်ချထားတယ်
ပြန်မလာတော့မယ့် ခရီးရှည်ကြီးဆီ ယုံကြည်ရာတွေ ထုဆစ်ရင်း
လူတစ်ယောက်ကို တစ်ချိန်ကြရင် ကျန်လူတစ်ယောက်က
စွန့်လွှတ်မှုကို အနစ်နာမခံနိုင်တဲ့အခါ ရရှိရတဲ့ နာကျင်မှုတွေလို
မှားခဲ့သမျှအတွက် တာဝန်ပြန်ကြေချင်တဲ့ စိတ်တွေ
အားလုံးအတွက် အသင့်အနေအထား ပြင်ဆင်ထားခဲ့
အတိုင်းအတာမရှိ ကတိစကားဟာ သံမဏိဆန်တယ်
ဒါ ကိုဝင်းကို ပြောတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး
ညဘက်ပျင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုနှိပ်ပြီး တာဝန်တွေကို
နားထောင်နေခဲ့တယ်… အရေးကြီးတာက နားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ပေါ့
ခုတော့ စိတ်ရောကိုယ်ပါစွမ်းအားမြှင့်သင်တန်းမှာ မြှုပ်နှံထားရတယ်
ခံစားချက်အကုန်ချိတ်ပိတ်ထားရပြီး အရေးတကြီးပို့ချချက်တွေမှာ စိတ်နှစ်ထားရတယ်
ကျန်နေခဲ့တဲ့တို့လို့တန်းလန်း အစီရင်ခံစာတွေထဲ တစ်ယောက်တည်းစိတ်ဖိစီးနေမလားတွေးပူ
အားလုံးနဲ့ဝေးရာတစ်ကိုယ်တည်းရောက်ရှိ…တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်
အနာခံပေးဖို့လိုမှန်း သိသိလာတယ်…Xin Xing တစ်လ်ိပ်နဲ့ ဖိုင်တွဲတစ်တွဲလုံးကို
စိုးရိမ်စိတ်တွေပါတယ်… သက်ပြင်းချနေတာကို အရင်ထဲက ကြည့်ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
ခင်ဝမ်းရဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် သီချင်းနားထောင်တိုင်း အရင်ကထက် ငြိမ်ဆိတ်မိတယ်
တစ်ချိန်ကြရင် လိုလိုမယ်မယ်ဆောင်ထားတဲ့ ဓါးမြှောင်ဟာ ငါ့နောက်ကျောအတွက်
ဖြစ်သွားမလား… အချိန်စွန်းတန်းတွေနှစ်ဖက်လုံး တရွေ့ ရွေ့ ပဲ့ကြွေခဲ့တယ်
အရာအားလုံးအတွက် ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိတဲ့ ပေးဆပ်သူတစ်ယောက်ပါ
နေညိုချိန် အိပ်တန်းပြန်လမ်းရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဆီ ပျံသန်းကြမယ့်
ငှက်တွေနဲ့အတူ ခရီးထွက်ကြဖို့ …နဲ့
ပြန်မလာတော့မယ့် ခရီးရှည်ကြီးဆီ အတူတကွသွားကြဖို့
ငါ သင်ခန်းစာတွေကို ကြိုးစားသင်ယူနေတယ်
ငါ ရောက်အောင် ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်။ ။
Posted by ရွှေ ကြယ် မိုး at 5:42 AM No comments:
ကဗျာဆရာတစ်ယောက်အဖြစ် ဘ၀ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး
သော်လည်းကောင်း ပူးတွဲလုပ်ဆောင်၍နေသည်။ တော်လှန်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ရှိသူ၊ အိတ်ဇစ်ဝါဒသမားဖြစ်သူ၊ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုမရှိသူစသဖြင့် Existentialist ကဗျာဆရာအဖြစ် လိုလိုလားလားသတ်မှတ်ခံထားရသည်။
မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ကဗျာပုဒ်ေ၇ (၂၀)ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဂြိုဟ်ပျက်အမှတ် ၂၀၁၃မှ အရေးပေါ်သတင်းပေးပို့ချက် ပုံနှိပ်ကဗျာစာအုပ်ကို ရဲဘော်ကဗျာဆရာ(၅)ဦးစုစည်း၍ မကြာသေးခင်က ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒို့ကျောင်းအမည်ရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ဒလမြို့နယ်တွင် ဦးစီးထူထောင်ခဲ့ပြီး ဆရာဖြစ်သော ကဗျာဆရာအောင်ရင်ငြိမ်းနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ စာသင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။
N.L.D ပါတီတွင် အမာခံလိုင်နာတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်ပြီး ပါတီရေးနှင့် တခြားသောနိုင်ငံရေးကိစ္စများကိုလည်း တက်ကြွစွာ
ဆောင်ရွက်နေသည်။ ဘ၀တွင် စီးကရက်များလောက် တခြားမည်သည့်အရာကမျှ အလေးမပါဟုယူဆသူဖြစ်သည်။
နာမည်အရင်းမှာ ရဲဝင့်အောင်ဖြစ်ပြီး ချေ ကို နှစ်သက်လေးစားလွန်းသဖြင့် မိတ်ဆွေရဲဘော်ကဗျာဆရာတချို့က
လက်ရှိပညာအရည်အချင်းမှာ ကွန်ပြူတာဒီပလိုမာဘွဲ့တစ်ခုနှင့် ဖီလော်ဆော်ဖီဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်။
ဆရာကြီး ဂျိမ်းဒစ်ကီရဲ့ စကားလေးပါ
ပန်းခရမ်းပြာဗေဒါလေး ကမ်းစပ်နားမှာ ငြိတွယ်
စံယူသော ကဗျာဆရာ (၅)ဦး
ကျွန်တော့်ကဗျာတွေကို ဒီဘလော့မှာသာမက ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာလည...
ကဗျာတွေဖတ်လို့ ဘ၀ကို နေပျော်တတ်ပါစေ. Simple theme. Powered by Blogger.